Imikhiqizo ye-Apple | Izindaba ze-IPhone
Konke mayelana ne- Imikhiqizo ye-Apple leyo akuyona i-iPhone, noma yiziphi izindaba ezihlobene ne-Apple ezingahlangene ne-iPhone ngqo. Sizokhuluma ngesitolo sohlelo lokusebenza App Store, ngaphezulu kwamanye ama-iDevices afana ne- I-Apple TV, i-iPad, i-iPod Touch; nakumasevisi afana ne-iTunes, iCloud futhi ngokujwayelekile noma yimuphi umkhiqizo ongeyona i-iPhone kodwa ohlobene ne-Apple nezindaba ezizungezile.
Por U-Alex Vicente kwenza Amaminithi angu-9 .
Ekupheleni kwesonto eledlule sikutshele kulokhu okuthunyelwe ukuthi iBloomberg imemezele ukuthi ihambisana nomhlaziyi uMing-Chi…
I-Aqara yethula isitolo sayo somkhiqizo e-Amazon Spain
Por ULuis Padilla kwenza 1 usuku .
I-Aqara yethula isitolo semikhiqizo e-Amazon Spain, lapho singathola khona imikhiqizo yayo kalula nangokushesha…
Funda izilimi noma yikuphi nangejubane lakho nge-italki
Por U-Ignacio Sala kwenza 1 usuku .
Akekho ongaphika ukuthi isiNgisi bekulokhu kuwulimi lomhlaba wonke, ulimi ongenza ukuthi uqondwe ngalo...
I-Apple izokwethula i-Apple TV entsha ethuthukisiwe neshibhile ngo-2022
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinsuku ze-4 .
I-Apple TV iwumkhiqizo i-apula elikhulu elinganikelanga isikhathi esanele kuwo noma…
Sala kahle i-iPod
Por ULuis Padilla kwenza Isonto eli-1 .
I-Apple isivalelise ngokuphelele i-iPod ngemuva kokumemezela ukuthi iyona kuphela imodeli emelene nokuthengiswa,…
Por U-Alex Vicente kwenza Isonto eli-1 .
Ukufika kwamahedfoni okuqala e-Apple, i-AirPods Max, kufike nemibala embalwa ngaphansi kwe…
Por UMiguel Hernandez kwenza Amaviki angu-2 .
I-Aqara ibuyekeza inzwa yayo yokunyakaza ngokuzimela okukhulu nokuzwela
I-Aqara iyaqhubeka nokuthuthukisa ikhathalogi yayo ebanzi yemikhiqizo ezishintshayo yasekhaya ehambisana ne-HomeKit, futhi isanda kuthuthukisa inzwa yayo yokunyakaza…
Bathola indlela yokususa i-akhawunti ye-iCloud ngaphandle kwephasiwedi
Landa amaphephadonga amasha we-iOS 11 ne-MacOS High Sierra
Ungaxhuma kanjani i-iPhone ku-TV
Izinhlelo zokusebenza ezi-8 ezinhle kakhulu zephephadonga ze-iPhone
ICloud yeWindows, konke odinga ukukwazi
Ingabe kuwufanele ukuthenga isitoreji esengeziwe se-iCloud?
Ungakucela kanjani ukubuyiselwa imali ku-App Store ngqo kusuka ku-iPhone